Taliyaha ciidamada Booliska Sareeye Gaas Xaamud oo dalka dib ugu soo laabtay – STAR FM SOMALIA
Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed Sareeya Gaas, Maxamed Xasan Xaamud ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka soo qeybgalay shirka Booliska Adduunka oo ka dhacay magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda.
Taliyaha iyo saraakiisha la socotay, waxaa garoonka diryaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Sareeya Gaas Maxamed Sh Xasan Xaamud oo kula hadlay saxaafada ayaa sheegay in si buuxda uu u soo laabtay xiriirkii ka dhexeyay booliska Soomaaliya iyo Booliska Adduunka, uuna ka helay ballanqaad ku aadan in la kordhiyo taageerada booliska Adduunka uu siiyo soomaaliya.
“Taageero ayaan hadda kadib ka helaynaa Booliska Addunka, waxayna tababaro siiyaan ciidanka booliska, iyagoo sidoo kalana qalab ciidan noogu deeqay waxaana hadda na soo gaari doona qalab aan si gaar ah ugu wada xiriirno booliska adduunka”ayuu yiri Gen Maxamed Sh Xasan Xaamud.
Ururka Booliska caalamiga ah ayaa waxaa ku mideysan 190 dowladood oo caalamka ah waana markii ugu horeysay ee 25 sano kadib dowlada Soomaaliya ay ka qeybgasho shir uu ururku yeesho.
Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa kahor inta uusan u safrin dalka Rwanda ee uu shikran ka dhacayay waxa uu soo booqday magaalooyin badan oo dalka ka mid ah isagoo la soo kulmay madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka isla markaana kala soo hadlay sida ay u wadashaqeyn lahaayeen ciidamada Booliska iyo madaxda maamulada ka jira dalka.